Taliyaha Ciidamada Milatariga Somaliya Oo Dhaliilay Hogaanka Saadka Ee Ciidanka.(Sawiro) – Heemaal News Network
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Sareeye gaas Daahir Aadan Cilmi Indha-qarshe ayaa dhaliil xoogan usoo jeediyay Hogaanka saadka ee ciidanka Milatariga Soomaaliya oo lagu eedeeyo in ay bixiyaan dareeska ciidanka .
Indha Qarshe oo ka hadlayay Aqoon kororsi ah loo soo xiray Saraakiil ka tirsan qeybaha Saadka ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in lagula xisaabtami doono hadii la arko qof aan ciidanka ka tirsaneyn oo dareeska Milatariga xiran.
Waxa uu sheegay taliyaha in ay jiraan dabley hubeesan oo xiran dareeska ciidanka kuwaa oo dadka gaadiidka dhibaato u geesta, waxa uuna xusay in raga isbaarooyinka dhiganaya aysan katirsaneyn ciidanka Milatariga.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Daahir Aadan Cilmi ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in dib u habeyn lagu sameeyo taliska Ciidanka xoogga,islamarkaana cidii dhibaato u geysata Shacabka lagula xisaabtami doono.
Ugu dambeyn Taliyaha ayaa saraakiisha iyo ciidanka Milatariga uga digay musuq maasuqa, waxa uuna cadeeyay in Musuq maasuqa uu dhaawacayo sumcada ciidanka Milataruga Soomaaliya.
Dab Caawa Qasaaro Xoogan Gaadhsiiyay Goobo Ganacsi Uo ku Taalla Degmo ka Tirsan Muqdisho.(Sawiro)
Dab aad u xoogan ayaa qabsaday caawa goobo ganacsi oo ku yaalla degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in dabku uu ka bilowday sandaqado ku yaalla boosteejada laga raaco, uuna ku fiday bakhaaro […]
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir Oo Sheegay in Hubka Laga Mamnuucay Muqdisho.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee dhinaca Amniga Maxamed C/llaahi Tuulax ayaa sheegay in la mamnuucay in hub lagu iibiyo ama lagu wato magaalada, isagoo caddeeyay in tallaabo laga qaadi doono cidii lagu arko. Wareysi uu […]
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay waxyaabaha ka dhacay magaalada Baydhabo. Mursal ayaa intaas ku daray inuu horrey uga digay arintan balse dowladu iska dhega marisay hadalkiisa. […]